बिहे गर्दै गायिका अञ्जु पन्त, यी हुन उनका हुनेवाला श्रीमान ! – Daily Nepal
बिहे गर्दै गायिका अञ्जु पन्त, यी हुन उनका हुनेवाला श्रीमान !
February 2, 2021 February 2, 2021 adminLeaveaComment on बिहे गर्दै गायिका अञ्जु पन्त, यी हुन उनका हुनेवाला श्रीमान !
गायक तथा संगीतकार मनोजराजसँग डि-भोर्स गरेकी गायिका अञ्जु पन्तले बिहेको तयारी गरेकी छिन् । अञ्जुले इलामका थिर कोइरालासँग बिहे गर्न लागेकी हुन् । दुबैको परिवारमा बिहेको कुराकानी भैरहेपनि मिति भने तय भएको छैन ।
थिरले भने–‘हामीहरु एकबर्षदेखि प्रेममा छौ । तर, तत्काल बिहे गर्ने, भव्य रुपमा गर्ने, लूगा नै सिउन दिएको भन्ने हल्लागलत हुन् । बिहेको कुरा भैरहेको छ । चाडै पनि हुनसक्छ, केही समय पनि लाग्न सक्छ ।’ उनले, आफूहरुले तत्काल बिहे गर्ने योजना नबनाएको भएपनि बजारमा आएको खबरले दबाब भने भएको जानकारी दिए ।
थिरसँगको एक अन्तरवार्ताको क्रममा अञ्जुको भेट भएको थियो । यसपछि, भने उनीहरु नजिक भएका थिए । थिरले अञ्जुको आवाजमा समावेश
थिर र अञ्जु दुबैले क्रिश्चियन धर्ममा आस्था राख्छन् । थिरसँगको एक अन्तरवार्ताको क्रममा अञ्जुको भेट भएको थियो । यसपछि, भने उनीहरु नजिक भएका थिए । थिरले अञ्जुको आवाजमा समावेश केही गीतमा शब्द समेत कोरेका छन् ।
यी हुन् भारतकी सबैभन्दा धनी युवती, कसरी जो’डिन् भारु ५ खर्ब ४० अर्ब ८० करोड ५० लाख ?